Daatubeeze barubba amaddinota formete bortaje fani.
Mittu woy batinyu barubbara meemoote ikkitubba ei. Qaagi meemoote ikkitubba batinye barubbara eittoro, baalunku eote ikkitubba fiixooma noonsa (Bullu AND).
Dannubbannire nna assaanonnire roore taje Xa'mote Akatigiddo afa dandaatto.
Formete meemoo uduunnigaxi aana Loosaansi Forme-Gari Meemoo bido kisittoro, meemooloosu aana hossanno. Formete Doysaanchi uduunnigaxa la"atto nna afantino maareekkuwa giddoonni soroowa dandaatto.
Formete Meemoo uduunni gaxi aana,Cufi ilka kisittoro, forme meemiiweello leellitino.
Title is: Formete meemonni hasamme